Pejin’ny shinglisy iray nambabo an’i Hong Kong tao anatin’ny indray alina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2015 5:01 GMT
Izao ny Kongish Daily mihaika ny mpamaky azy hahatakatra ny fangarom-pehezanteny Kantoney [avy ao Canton faritra manodidina an'i Hong Kong] sy Anglisy. Ny andalana, “What spring r u upping?” dia azo adika ho “Inona p**y ny resahinareo e?”
[Naotin'ny mpanitsy teny anglisy: Ny tsanganana dia nosoratan'i Kris Cheng ary nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 6 Aogositra. Nivoaka tato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ny Shinglisy dia ilazana ny fitenenana sy fanoratana teny anglisy voatsindrin'ny fiteny Shinoa. Ao Hong Kong, izay miteny kantoney ny ankamaroan'ny mponina, ny voambolana “Kongish” dia manampy amin'ny fahazoana ny fiavahan'ny Shinglisy amin'ny endrika kantoney.
Ny “Kongish” amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny soratra SMS, any amin'ny karajia sy ny tambajotra sosialy noho ny endritsoratra shinoa tsy mora kokoa noho ny endritsoratra anglisy rehefa mampiasa ireo fitaovana finday.]
Nisy pejy Facebook iray manolotra ny vaovaon'i Hong Kong amin'ny marika “Shinglisy” mampiavaka ny nosy nahazo mpitia mihoatra ny 15.000 tao anatin'ny indray alina monja.
Kongish Daily, izay manana tarigetra hoe “mponin'i Hong Kong miteny ny anglisin'i Hong Kong,” no nampitolagaga teo noho eo tao an-toerana rehefa namoaka andian-tantara izay ireo kinga amin'ny fitenenana kantoney sy anglisy ihany no mahatakatra ny lazainy.
Iray amin'ireo tsanganana nivoaka voalohany tao amin'ny pejy ny tantaran'ny “tolotra angidimby $400k”, izay nahazo mpitia mihoatra ny 11.000 amin'izao fotoana izao.
Ny pejy dia mampiasa fehezanteny tahaka ny hoe “even ng eat ng play” (manao ara-bakinteny hoe “na ny tsy mihinana ary tsy milalao”), izay midika hoe “eny fa na dia tsy mandany vola amin'ny sakafo sy ny revy aza isika.”
Ao amin'ny tsanganana hafa, ny mpiantsehatra sy mpilalao sarimihetsika ao Hong Kong Jackie Chan aza dia tondroina ho “manambary be dia be”. Izany fiteny izany ami'ny kantoney dia manondro olona manankarena.
Ny teny kantoney dia ankatoavina amin'ny ankapobeny ho manana vaninteny enina. Tamin'ny 1993 ny fikambanana ara-pitenenan'i Hong Kong no nandrafitra ny Jyutping, izay manao amin'ny endritsoratra romana [latina] ny teny kantoney. Ny rafitra dia mampiasa tarehimarika eo ankilan'ny teny kantoney amin'ny endritsoratra latina, ka ireny no manondro ny vaninteniny [sy tsindrim-peony].
Ao amin'ny Kongish Daily, anefa, dia tsy mametraka tsindrimpeo ireo tsanganana ao aminy. Tsy maintsy mitsatoka ny tsindrimpeon'ny voambolana iray mifototra amin'ny endritsoratra anglisy ny mpamaky.
Amin'izay fotoana izay ny mpamaky tsy maintsy lalindalim-pahaizana teny kantoney sy ny kolontsaim-panalan'andron'i Hong Kong vao mahatakatra ny lazain'ireo tsanganana ao aminy.